Naya Post Nepal | कांग्रेसले टुं’ग्यायो राष्ट्रिय सभाका ६ उम्मेदवार, को-को हुन् ति भा’ग्यमानी ?
कांग्रेसले टुं’ग्यायो राष्ट्रिय सभाका ६ उम्मेदवार, को-को हुन् ति भा’ग्यमानी ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय का’र्यसमिति बैठक सकिए को छ। राष्ट्रिय सभाको नि’र्वाचनमा उम्मेदवार तय गर्न सभापति शे रबहा दुर देउवाले बैठक बो’लाएका हुन्। बैठकले १२ माघमा हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कां’ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार त’य गरेको छ।
प्रदेश १ मा गोपाल बस्नेत, बागमतीमा कृष्णप्रसाद पौडेल, गण्डकी मा कमला पन्त, लुम्बिनीमा युवराज शर्मा, कर्णालीमा दुर्गा पुन र सुदूरपश्चिममा नारायण दत्त मिश्र उम्मेदवार रहने केन्द्रीय सदस्य गो विन्द भट्टराईले जानकारी दिए।
नेपाली कांग्रेसको १४औँ म’हाधिवेशनपछि सोमबार दोस्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको हो । केन्द्रीय का’र्यसमिति बैठक बस्नु अघि प’दाधिकारी बै’ठक बसेको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्यीय छ भने ती स’दस्यको कार्यकाल छ वर्ष को हुनेछ तर, पहिलो एक कार्यकालका लागि गोलाप्रथाबाट सदस्य हरूको पदावधि नि’र्धारण गरिएको थियो। त्यसमध्ये पहिला दुई वर्ष मै १९ जनाको प’दावधि स’किएर निर्वाचन भइसकेको छ । यसपट क २० जनाको पदावधि सकिँदैछ । अर्का दुई वर्षपछि अन्य २० ज नाको प’दावधि सकिनेछ।
आज बिहान बसेको स’त्तारुढ गठबन्धनको बैठकले कां’ग्रेसलाई ६, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई ५-५, जनता समाजवा दी पार्टीलाई २ र राष्ट्रिय ज’नमोर्चालाई एक सिट छु’ट्याएको थियो।
२०७८ पुष १९, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 165 Views